Google မှ 404 Error ပြသည့် ပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ - MYSTERY ZILLION
Google မှ 404 Error ပြသည့် ပြဿနာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ
ကျနော် http://www.blogger.com မှာ blog ရေးပါတယ်...Gmail Account တစ်ခုနဲ့ Sign in ဝင်ပြီးရေးပါတယ်။ နောက်တော့ Gmail Account အသစ်လုပ်ပြီး မေးလ်အသစ်နဲ့ Sign in ဝင်ပြီး Blog ရေးဖို့အတွက် အရင်အကောင့်အဟောင်းနဲ့ ဝင်ရေးတဲ့ Blog ကို Export လုပ်လိုက်ပါတယ်...။ .xml ဖိုင်တစ်ခု Download ကျလာပြီး သိမ်းထာလိုက်ပါတယ်...။ နောက်အကောင့်အသစ်နဲ့ ဝင်ရေးဖို့အတွက် Blogger မှာ အရင် Blog ကအတိုင်း နာမည်တူတွေလည်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်တော့ သိမ်းထားတဲ့ .xml ဖိုင်ကို အကောင့်အသစ်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ Blog မှာ Import ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေပါဘူး...Error ပြတာနဲ့ ဆက်မလုပ်တော့ပဲ ထားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်အတွေးက အကောင့်အသစ်နဲ့ရေးမယ့် Blog မှာ အရင်အဟောင်းက Template တွေ Post တွေ အကုန်ကူးယူပြီးမှ Blog အဟောင်းကို ဖျက်လိုက်မယ် စိတ်ကူးထားတယ်။ အဟောင်းကို မဖျက်သေးပဲ အသစ်မှာ အဟောင်းနဲ့ နာမည်တူပေးတာရော Import လုပ်လိုက်တဲ့အတွက် Google မှာ ဆင်တူရိုးမှာ Blog ဆိုက်နှစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် နောက်ဆုံး ဖွင့်ကြည့်လို့ရတဲ့ Blog ဆိုက်အဟောင်းက 404 Error Page ဖြစ်သွားပါတယ်။ .blogspot.com ဆိုပြီး Address Bar မှာ ရိုက်ပြီး ဖွင့်လိုက်တိုင်း Google 404 . That's an error. ဆိုတဲ့ Page ပဲ ပေါ်လာပါတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ ကူညီကြပါဦးဗျာ....။
March 2012 edited March 2012 Administrators
You can remove search result from non existing website.
If your own website or blog, you can add like
google may remove in next few week.